El Presidente: Movie Review - Nasyonalistik Pinoy - Ny mpisolovava ny Philippines! Filipiana mpisolovava, an-tserasera rehetra.
El Presidente: Movie Review - Nasyonalistik Pinoy
Ny sasany tsikaritro ao amin'ny sarimihetsika
Ao amin'ny mitohy ny fanorenana ny"BioEpic"ny sarimihetsika, efa voaporofo fa ny tenantsika no tena dia manan-karena kosa ny kolontsaina sy ny tantaran'ny firenena ao FilipinaHafa horonan-tsary nampiseho ny herimpony ho katrayduran ny sasany manan-danja ny mpiasa ao amin'ny valin-tsehatra ny tantara El Presidente. Avy amin'ny fahatsiarovana amin'ny Aguinaldo rehetra ny voalaza ao amin'ny sarimihetsika, noho izany, tokana avy amin'ny fomba fijery ny york rehetra ny voalaza ao amin'ny sarimihetsika.
Amin'ny horonan-tsary pinagkagastusan sarotra, be dia be ny mpilalao izay mametraka eo amin'ny ny toetra amam-panahy izay indraindray mety izany, indraindray tsy.
Voalohany, tsara ny mampiseho ny mpiasa ny Aguinaldo, tsara nifidy ny mpilalao ary nomena ny fitsarana amin'ny ankapobeny.
Tsara tarehy izy ireo nisafidy ny Gregorio Del Pilar. Kanefa, etsy andaniny, dia nahamarika antitra loatra fa nahazo ny Procopio Bonifacio. Loatra koa ho antitra ny tanterahana ny vady faharoa ny Aguinaldo mba ho zanaky ny vadiny ny iray tamin'ireo namany ny Jeneraly Miyong. Tsara ihany koa ny sitrana Bonifacio, fa koa nanao fototr'izany sy ny ratsy ny Supremo. Mazava ho azy fa misy fitsarana an-tendrony tena ny sarimihetsika ho an'ny ny Aguinaldo. Koa ny iray aho dia nahatsikaritra ny peta-drindrina ny sarimihetsika. Maria sy ny Hilaria dia teo an-tampon'ny ny peta-drindrina sy Luna sy Bonifacio ihany koa any amin'ny sisin'ny ny rano.
Inona no dikan'izany."Ny fitiavana sy ny Fankahalana"ianao dia tsy izy.
Nahita aho ary nahatsikaritra ihany fa napetrany tao an-tampon'ny ny peta-drindrina ny havan-dravehivavy ny rano, raha eo amin'ny side kosa dia ny nakaaway izany. Raha toa isika ka mijery ny pics, Dia Luna sy Bonifacio dia manana ny"Fototr'izany Maso"(izay aho hoe). Loatra izy ireo nanao ny fototr'izany ny roa. Raha toa miverina ihany isika ny tantara isika, Luna sy Bonifacio dia hoy ho ny roa mahery fo izay novonoina ho faty izy - maty amin'ny Ankapobeny. Ny sarimihetsika ihany koa ny milaza fa i jesoa Buencamino hamono amin'ny Ankapobeny Luna, raha miaiky ao an-tsainao nanameloka - maty nya Bonifacio saingy ny fitarihana ny Filankevitra de la Vai. Noho izany, dia voadio ny sarimihetsika ny anaran Aguinaldo. Ny tantara ihany koa ny Jeneraly Gregorio del Pilar, mino aho fa, izany dia fohy loatra mba hilaza ny mpijery mba ho tonga an-tanana ankavanan Ankapobeny Aguinaldo. Fisorohana poker ihany koa ny sarimihetsika miaraka amin'ny fandraisana anjaran'ny Del Pilar mikasika ireny olana ireny famonoana olona na ny famonoana ny filoha Aguinaldo. Iray monja hieritreritra, aho antony, angamba ianao tsy nataony tao an-tsoratra-fa raha tsy izany dia zavatra hankarary anao ny indray andro tsy azo antoka. Tena bellow ahy mafy ao hita fa Bonifacio dia ny famakiana - ny fanisam-bato. Eny, lasa ny lehiben'ny mpitantana dia toy izany ny fifidianana, saingy tsy niteny izy fa ny tafiditra.
Navoaka ihany koa ny napakaarogante sy ny fitiavan-tena ny Supremo ao an-toerana, ara-pihetseham-po sy ny tsipika tsipika.
Ny sasany dia tsara sy sasany dia ratsy
Mihevitra koa aho, diso nampiseho"ny tejeros fivoriambe ny Fivoriambe walk-out".
(antsoina hoe) ihany Tony Bonifacio rehefa nanontany hoe hiala ny hoe: Daniel Tirona, rehefa tsy nanaiky fotsiny izany, izy ireo no tonga mahery setra ary tezitra.
Tsy mino aho fa noho ny manan-tsaina fanenjehana Bonifacio. Koa tsy naseho ny"trano-maizina"ny toerana Bonifacio. Kanefa, na dia manohitra ahy amin 'ny làlan' ny famonoana hoy ny sarimihetsika, ny tiako dia ny fampisehoana efa ao Bonifacio. Izy ireo tsy nanao kanosa sy ny tahotra ny Supremo fa naseho azy ireo ny fitiavana ny Bonifacio any an-tanindrazana. Iray ihany koa pinagtataka ko no pagsulpot tsy fantatra toetra amam-panahy atao hoe"Gardioso", dia nitady azy tao amin'ny boky momba ny tantara fa tsy Mahita sy mahafantatra izay zavatra izay na vao natao ny. Dia Gardioso no lazaina ho iraka mitondra ny rano izay nagsuplong azy ny Amerikana. Fa izaho mieritreritra izany no Cecilio manam-Pahaizana manokana ny nagsuplong azy sy nanome telo, taratasy ny Torah amin'ny taratasy Ankapobeny Lacuna. Nefa, hoy ny sarimihetsika dia Gardioso manana ny zanany lahy atao hoe Cecilio. Tsy mba te hamoaka izany dia Gardioso (manam-Pahaizana manokana) ny nagsuplong tsy ny Cecilio manam-Pahaizana manokana. (hmmmm) Kanefa, na dia teo aza izany, dia lasa ny vokatry izany ao amin'ny sarimihetsika ary koa ao amin'ny tantara Filipiana. Raha tsy izany no marina ary izany koa fitongilanana, ny farany dia hita ny mbola ny hafatry isaky ny mahery fo ao amin'ny vanim-potoana Filipino- fitiavana ny tanindrazana. TIA AFAKA MANAO SARIMIHETSIKA ITY. NO AZONAO ANTOKA DIA AOKA FANTATRAO MOMBA IZANY. SOSO-kevitra. TARA NY FANEHOAN-KEVITRA. Moa ve ianao eo Afovoany. Vonona ianao maipasatupad ny Lalàna momba ny fisaraham-Panambadiana eto Filipina. Fifidianana tsy hanohana ny finoana. Ny Volavolan-dalàna ny fisaraham-panambadiana: Tanterahina izany ankehitriny. fanontaniana po izay po bah ny tena fametrahana ny tantara. fototra po kc ahy ny toerana maro aseho ao amin'ilay sarimihetsika. Eny, marina ny anao, tena misy marina ny faritra izay efa hita ao amin'ny sarimihetsika, fa ny tena izay izy ireo (heveriko fa) dia manodidina Vigan (angamba amin'ny fotoana Amerikana). Samatalang nandritra ny mazava ho azy fa ny espaniola, angamba, nanao ny zava-drehetra Cavite. Tiako ny sarimihetsika tanteraka.
tsara tarehy toko Gen.
Del Pilar, ary Tadiavo A. Bonifacio Nanadio ireo ny anaran Bonifacio mandra-tara.
Ary ny pinakanagustohan aho hatramin'izay ny faminaniana ao amin'ny Gen. Aguinaldo, ary taty aoriana, nahita izy dia ny fahatelo ny vehivavy eo amin'ny fiainana, nefa tsy fantatro mapapakasalan dia ny tanindrazana. ny tsara kokoa ny sarimihetsika ity noho ny"tantaram-pitiavana"hanakona. manan-danja kokoa io horonantsary.
ny fanantenana no mitondra eo mitohy ny fandaharana ity.
izany dia ahitana aho aho maxadong mahafantatra ny tantaran'i Filipina, fa noho ity horonan-tsary taitra ny liana mba hamaky ny momba ny tantarantsika. Velona ianao tafiditra Jhay. Marina ianao, manantena aho fa mbola hanohy io kilasy ny sarimihetsika eto Filipina, ary tsy handà ianao fa tena zava-misy dia tena tsara kokoa izany noho ny tantaram-pitiavana izay adika ao amin'ny"Tandrefana teti-Dratsin'ny". Tiako kokoa bebe kokoa no liana amin'ny seho ity sy mankafy ny tena ambony sy ny tantara. Tsara napa tsara sarimihetsika. Antenaina fa mifantoka kokoa amin'ny kanefa dia ny saina ny asan ity sarimihetsika kokoa tena ny hianatra momba ny tantaran'i Filipina. Enga anie mba ho maro ny mpamokatra sy ny tale manana tombontsoa eo amin'ny fanamboarana ity karazana sarimihetsika. Tena voatahy tokoa isika fa tsy antsika ny tale toy ny avy amin'i Mark Meily (El Filoha) sy Richard Somes (Supremo). Mety maro ny tanora ho liana amin'ny tantara. rehefa nijery tsara tsara akuh ao amin'ny fandaharana miresaka ny tsiky tao ny fotoana mahafantatra sy napanuod fa koa ny fanadihadiana akuh fanafahana pla ka ny tena tantara. (kya teny malagasy lasa mazava ny finiavana g. emilio aguinaldo ao amin'ny tantara. eto ny mahery fo dto antenaina fa raha ny tantara dia mety aho ary tena misy fifandraisany amin'ny tantara ny hita taratra indrindra kming maiingganyung nijery in-gantong sarimihetsika. fa ny zavatra ilaina ny fiovana sasany dia ny sasany amin'izy ireo. saingy ny mampihomehy dia ny mampiseho indrindra ny mpilalao izay faniriana tanteraka.) enga anie ny mamerina sy ho fa tantara marina.
Marina ianao, Marjorie.
Manantena tokoa aho ka efa nisy sarimihetsika ara-tantara izay misy fitsarana an-tendrony sy tsy fanadiovana ny anarany. Manantena aho fa efa nivoatra kokoa ny horonantsary navoakan'i ity sarimihetsika. angamba, natao izy ireo raha ny marina hamafa ny sasany sehatra mba del Pilar noho afaka ny ho fanoloana ny sary aguinaldo. noho izany, simba izany aguinaldo. azonao atao ihany koa ny hampiakatra ny fikarohana del pilar. araka nick joaquin (raha tsy izaho no diso) lasa ny piozila tsinjaraina amin'ny aguinaldo dia del pilar.
Manantena aho fa izaho namaly ny fanontaniana, misaotra betsaka Afaka manontany izay misy ny faritra sarimihetsika ity dia hita eo amin'ny roa boobs ny tsirairay ho amin'ny fampandrosoana.
hmm, tsaroako, maro kosa noho ny tanjon ity sarimihetsika, ny hilaza ny momba ny tanàna. Satria tena ela aho napanuod izany, tena tsy ny rehetra no afaka milaza aminareo ny marina. Ny tsaroako, ny iray ny faritra ny sarimihetsika mampiseho ny fifampiankinan'ny ho amin'ny fampandrosoana dia ny ampahany izay lasa tsy miankina fa ny Cavite El Viejo amin'ny teny espaniôla mpanjanaka. Jereo fa misy mankalaza ny"mponina"ny rano sy ny entana tao ny herim-pony. Ny iray hafa dia aseho ny sorona ny revolisiona, indrindra fa ny lehilahy izay eh, maty noana izy ireo ary tsy nisy sakafo ho hanina, afa-tsy ao amin'ny ady ho an'ny tanindrazana. Maro ny hafa, ao pagkakaalala aho, fa tsy izay mazava ho fahatsiarovana sy aho mety ho diso fandray ahy kokoa. Afa-tsy izany, manantena aho nanampy anao, Isay Misaotra noho ny fanehoan-kevitra sy mankafy ny bilaogy miarahaba poi. Izay ny mpiasa.ii San-po ny fametrahana.iii.
Inona no famintinana.iv.
Ny zavatra tsara indrindra izy ireo.ary v. Inona no fiafaran ny tantara. Raha intensyion tena tserasera hanaraha-maso, dia afaka hahatakatra bebe kokoa"ny sarimihetsika raha papanoorin niyo izany aho dia hiaiky po nung voalohany nijery aho fotoana afaka hihaino fa amin'ny farany dia mbola ny aoriana no tsara tarehy, sy ny maro hafa-po tanteraka amin'ny aguinaldo ny adidy izy nampanantena ny manao ao an-tanàna. FAHEFANA BEBE KOKOA. Misaotra betsaka, Ghem, naneho hevitra. Tsy adino angamba aho, dia jereo raha tsy napanuod ny sarimihetsika. Mahafinaritra tokoa ny fanahin ny horonan-tsary saingy ilay"fomba"aho hitodika any amin'ny fanadihadiana ny fampiasana ny"ara-tantara"review. Aho, dia tsy mba nanevateva ao amin'ny sarimihetsika nefa aho nandinika ihany ny antsipirihany ao amin'ny sarimihetsika. Misaotra betsaka indray sy fahefana bebe Kokoa ihany koa ho anao. Fitongilanana ity sarimihetsika, Marmi-po dia tsy hita avokoa ny tantara dia ny fisorohana ny satroka ny aguinaldo. Koa nanao fototr'izany dia Luna sy boni. Rehetra ny lehibe indrindra filipiana niaina ny any an-tanana ihany koa ny filipiana maty. fa ny zava-misy sy mandra-amin'izao fotoana izao dia ny fahaiza-miasa izany. Tsy misy firaisan-kina. laglagan amin'ny anaran'ny fahefana. Satria hatramin'izao. tena tsara sarimihetsika. be dia be toy ny papa aho nabilib tena pakikipglaban ny ting mahery fo na dia velona amin'ny tsato-kazo - ny fampiasana ny misy lahatsoratra ao amin'io bilaogy noho ny entimody, thesis, lahatsoratra na ny zavatra hafa, mba hitanisa fa ny hany fanontaniana araka ny tokony ho izy. Karazana ao ny adiresy mailaka handray ny fampahatsiahivana ao ny zava-nitranga vaovao sy ny bilaogy lahatsoratra.
Mihatra Ho an'ny U. s. Fahazoan-dàlana